प्रेम असफल भएपछी एनआइसी एशिया बैंकका कर्मचारीले बैंककै भवनमा गरे आत्महत्या ! – AB Sansar
December 31, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on प्रेम असफल भएपछी एनआइसी एशिया बैंकका कर्मचारीले बैंककै भवनमा गरे आत्महत्या !
कन्चनपुर । एनआइसी एशिया बैंकका कर्मचारीले आत्महत्या गरेका छन् । सिन्धुलीकमलामाइ नगरपालिका–१४ रानिबाँस घर भएका धिरज न्यौपानेले कन्चनपुरको शाखामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। उनले बैङ्क रहेको घरको तेस्रो तलामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् । उनले आत्महत्या गरेको कोठामा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको कार्यालय रहेको छ।
आत्महत्याको कारण भने उनको टुटेको प्रेम भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उल्लेख छ । उउनको खल्ती बाट ‘सुसाईड’ नोट भेटिएको छ जसमा आफूले एक युवतीलाई साँचो प्रेम गरेको र प्रेममा असफल भए पछि आत्महत्या गरेको लेखिएको छ ।
आइतबार बिहान ८ः३० बजे आफ्नो भाउजू सँग फोनमा सम्पर्क गरेका उनले ९ बजे पछि आत्महत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । अहिले उनको शवलाई पोस्टमार्टमको लागि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ भने आत्महत्या बारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक अमर बहादुर थापा क्षेत्रीले बताए ।
रीमा लेख्छिन्, ‘सिंगल हुँदैमा मरिँदैन’
December 2, 2020 December 2, 2020 Ab-संसार
शनिबार बिहानै कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थीहरुलाइ आयो अत्यन्तै जरुरी सुचना ! पूरा पढ्नुहोस –